Budata PregBuddy APK maka Android
Free Budata maka Android (45.00 MB)
PreBuddy bụ ngwa nlekota afọ ime na-arụ ọrụ na ekwentị gam akporo na mbadamba.
Ọ bụ ezie na anyị bụ ụmụ nwoke amaghị kpọmkwem otú afọ ime siri sie ike, anyị na-agbalị ịghọta. Nime ọnwa 9, mgbe ihe ndị nne kwesịrị ime na-eto dị ka ugwu, ọ dị mkpa ịkwaga mgbe nile ka a mụọ nwa dị mma. Ọ bụ ezie na mmemme sitere naka ndị dọkịta bara ezigbo uru maka nke a, enwere ike ịchọ ngwaọrụ enyemaka dị iche iche. PregBuddy bụ ngwa nwere ike dee aha ya netiti ha ngwa ngwa.
Mgbe nbudata ngwa ahụ, ị ​​na-akọwapụta izu nke afọ ime gị wee tinye ozi gbasara nwa gị. Ngwa ahụ depụtara ihe a ga-emere gị otu otu. Ụbọchị ọ bụla na-agafe, ngwa ahụ na-emelite onwe ya na-akpaghị aka, na-enye gị ozi dị mkpa. Na mgbakwunye na ndị a, ị nwere ike ịchọta ihe niile ị na-achọsi ike na ngwa ahụ ma ị nwere ike iru akụkọ bara uru gbasara afọ ime.
Nha faịlụ: 45.00 MB